IPorta yamandla kaJack
Ibhotile yeHydraulic yomoya
I-ATV kunye nezixhobo zoLungiso lweSithuthuthu
Ivili leDolly kunye nokuBekwa kweZithuthi uJack
Ngaphandle kwentlekele ye-coronavirus
I-Automechanika Shanghai sesona siganeko sibaluleke kakhulu kushishino lweemoto e China. Ngaphandle kwengxaki yentsholongwane ye-corona, u-Automechanika Shanghai uhlala ekhalenda efanelekileyo yezorhwebo. Ngaphezulu kwe-140 yamazwe kunye neenkampani ezingaphezulu kwama-6000 ezihambisa inkonzo phakathi kwe-2 ne-5 kaDisemba. Ithath ababini...
Amanyathelo okuthintela ukusetyenziswa kweejack
1. Xa usebenzisa i-catty eyomileyo, kufuneka ibekwe iflethi, kwaye iinkuni zinokuxhonywa emazantsi wekati eyomileyo ukunqanda ukuqhuqha.Into yokutyibilika kwenzeka ngexesha lokusetyenziswa, ukunqanda imivundla kunye nokwenza umonakalo emzimbeni. 2. Emva kokufaka i-jack eyomileyo, kuya kufuneka ubambe inxenye yec ...
Ifilosofi yethu yenkampani
Izixhobo zikaHaiyan Jiaye Oomatshini bezixhobo Co., Ltd.iseHaitang Industrial Park, eXitangqiao Idolophu. Le nkampani iye phambili ifilosofi yeshishini kunye nobuchwepheshe. Phantsi kwenkolelo eqinileyo "yothando olungaphaya kwamaphupha" kunye nomoya "wentembeko, umbulelo, ukusebenza ngokukuko, ukusebenzisana, kwi ...
Ungayithintela njani iJack hydraulic jack ekurhwebeni?
IiJacks zizixhobo zethu zokuphakamisa eziqhelekileyo eziqhelekileyo. Ngophuhliso loqoqosho, abantu abaninzi ngakumbi bathenga iimoto, kwaye iiback ezithe tyaba zeemoto nazo zithandwa kakhulu. Iijack ezithe tye zithambekele ekonakaleni ngexesha lokusetyenziswa. Ngokukodwa, umhlwa ikwayingxaki eqhelekileyo kule mihla ....
Izizathu ezi-3 zokukhetha iijack ezithe tyaba
Zininzi iindidi zeejack. Apha sixoxa kuphela ngeentlobo ezisetyenziswa kakhulu ngabahlanguli bethu, ezinokwahlulwahlulwahlulwahlulwahlulwe zangamacandelo amabini: Iijethi zebhodi yezithuthi zabathengi; Inkosi izisa eyayo ijack ethe tye. Ngokubhekisele kulo msebenzi ngokwawo, zombini ezi zimbini zingasentla ...
Izixhobo zokulungisa ngokuzenzekelayo kunye nezixhobo: izixhobo zamandla
Njengesixhobo esiqhelekileyo emsebenzini wolondolozo lwemihla ngemihla kamasifundisane, izixhobo zombane zisetyenziswa kakhulu emsebenzini ngenxa yesayizi yazo encinci, ubunzima bokukhanya, ukuthwala okufanelekileyo, ukusebenza ngokukuko, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nokusetyenziswa kwendalo ngokubanzi. I-grinder yombane yokusila yombane zii-o ...
Uluhlu lwesicelo sejack hydraulic
ngomphathi ku 19-11-23
Uluhlu lwe-hydraulic jack yesicelo se-Hydraulic transmission inezinzuzo ezininzi ezibalaseleyo, ngoko isetyenziswa ngokubanzi, njengokusetyenziswa ngokubanzi kwemveliso yeplastiki, oomatshini bokucinezela, izixhobo zomatshini, njl. oomatshini abahambahambayo koomatshini bokwakha, oomatshini bokwakha, i-agr ...
Lo mgangatho awufumaneki emotweni! Ngelishwa, abantu abaninzi abayazi indlela yokuyisebenzisa
Ngoku ekubeni abanini bemoto ngokuqinisekileyo bengamqhelanga uJack, sele sisixhobo esisemgangathweni, uJack ngokubanzi wenziwe ngezinto zentsimbi ekumgangatho ophezulu, kuneemveliso ezifanayo ezomelele ngakumbi, njengohlobo lwezixhobo ezisetyenziselwa ukuphakamisa izixhobo, nikezela ngendawo ephezulu yendwe. isezantsi, ikakhulu isekwe kwi-lever p ...
Ngaba ungayisebenzisa ngokufanelekileyo ijack xa utshintsha amavili?
Amavili okonga yinxalenye ebalulekileyo yemoto, kunye nejack sisixhobo esifanelekileyo sokutshintsha amavili. Kutshanje, oonondaba bafundile kudliwanondlebe, abaqhubi abaninzi abayazi indlela yokusebenzisa iJack, kodwa abazi ukuba kwindawo engafanelekanga noJack kuya kuzisa umonakalo omkhulu kwisithuthi. Emikhulu ...
Umgaqo wokuzama ukonga utsalo
Njengokuba wonke umntu esazi, uninzi lwevili lemoto elihamba ngezithuthi nokuba lidibanisa naxa lidibanisa kwaye lilungisa, ukongeza kwitekhnoloji ekhoyo yesikrufu somoya esitsaliweyo kunye nokuvulwa kwesokethi ezizinto ezenziwa ngoomatshini kuphela, ezingonelanga ekusebenziseni azihambelani nemoto yevili nut ...
IiJacks ezisetyenzisiweyo xa kugqobhoza imoto?
1, ngaphambi kokusetyenziswa kufuneka kujonge ukuba ngaba ziindawo eziqhelekileyo na. 2, ukusetyenziswa kohambelwano olungqongqo kufuneka kube ziiparameter eziphambili zemigaqo, akufuneki kube ngumthwalo ongaphezulu kakhulu, okanye xa ukuphakamisa ukuphakama okanye ukuphakamisa iitoni ngaphezulu kokubonelelwa komphezulu wesilinda kuya kuba kukuchitheka okukhulu kweoyile. 3, ...
I-Jiaxing: ukuthumela kumgangatho weJack amaxabiso aphezulu azinzileyo ngaphambi kukaMeyi, ukonyuka kwama-20%
UJack yenye yeemveliso zamanye amazwe ezenziwa ngoomatshini kunye nombane eJiaxing. Inempawu zenkqubo elula, umqobo ophantsi, inqanaba elincinci lokusebenza kunye nenqanaba eliphezulu leqela lezemveliso. Izolo (nge-7 kaJuni), intatheli evela kuhlolo lokungena lokuphuma kunye ne-Quarantin ...
Izixhobo zokulungisa, IHydraulic Garage Jack 3ton, IJack Hydraulic Garage Jack, Imoto Creeper, IHydraulic Garage Jack, Izixhobo zeMoto,
Lwedilesi: No. 699 Yintan Road, Haiyan Economic Development Zone, Jiaxing, Zhejiang kwiPhondo
I-Automechanika Shanghai yeyona im ...
1.Xa usebenzisa ikati eyomileyo, kufuneka ip ...